क्रिकेट टिमको क्याप्टेन ... -
दाङ । म नेपाली भए पनि भारतमै जन्मिए । बुबाले भारतमै लामो समय काम गरेका कारण मेरो बाल्यकाल पनि भारतमै बित्यो । त्यही क्रममा इण्डियामै हुर्के, इण्डियामै पढे । स्कूलमा पढ्ने बेला मलाई पढाई भन्दा बढी ध्यान क्रिकेट खेलमा हुन्थ्यो । त्यही हुनाले म सानैदेखि क्रिकेट खेलमा लागे । मैले २०४३–०४४ सालतिर देहरादुनमा रहेको आशाराम बैद्धिक इन्टर कलेजमा पढ्दै गर्दा क्रिकेट खेल्न सिके । त्यो बेला कक्षा १० मा पढ्थे ।
म भन्दा पहिले मेरो नारायण दाइ क्रिकेट खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले खेलेको देख्दा मलाई पनि रहर लाग्ने गथ्र्याे । भारतमा क्रिकेट खेललाई राम्रो खेलका रुपमा हेरिने भएका कारण धेरैको झुकाव क्रिकेट खेलतिरै थियो । त्यो स्कूलले पढाईसँगै क्रिकेटलाई पनि महत्व दिने गथ्र्योे । क्रिकेटमा समेत मैले पढ्ने कलेजले राम्रै प्रभाव बनाएको कलेजस्तरमा हुने प्रतियोगिताहरुमा उपाधि समेत जित्ने गरेको थियो । त्यो स्कूलमा रहेको क्रिकेट टिमको क्याप्टेन प्रायः भारतीय मुलका विद्यार्थीहरु हुने गरेका थिए । नेपाली विद्यार्थीहरुले अवसर प्राप्त गरेका थिएनन् । क्रिकेट खेल्दै गरेको मलाई क्याप्टेन बन्ने रहर पनि थियो । क्याप्टेनमा प्रायः भारतीय विद्यार्थी नै हुने गरेकाले म हुँलाझै लाग्दैनथ्यो । तर मलाई त्यो अवसर मिल्यो । म पहिलो पटक उक्त कलेजको क्रिकेट टिमको नेपाली मुलको विद्यार्थी क्याप्टेन बन्ने अवसर पाएको थिएँ । आशाराम बैद्धिक इन्टर कलेजको पहिलो नेपाली मुलको विद्यार्थी क्याप्टेन बन्ने अवसर प्राप्त गर्दाको त्यो क्षण मेरा जीवनको पहिलो खुशी हो । जुन क्षण मेरा जीवनको सबैभन्दा खुशीको क्षणका रुपमा रहेको नेपाल क्रिकेट एशोसिएशन (क्यान) प्रदेश नं. ५ र कर्णाली प्रदेशका सदस्य रहेका कैलाश रोका मगरले बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ को नयाँ बसपार्क निवासी उनले बाल्यकाल भारतको देहरादुनमा बिताएका थिए । बाल्यकाल देहरादुनमा बिताएर फर्किएका रोकाले दाङ जिल्लाको क्रिकेट खेल क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । त्यो समयमा मेहन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक समेत रहेका नारायणसिंह गुरुङ, उपेन्द्र भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, मिन गिरी, मन्जुमन अत्तर, जावेद सिद्दिकी, मोहमत आमिर सिद्दिकीलगायले दाङ जिल्लाको क्रिकेटलाई सुरु गरेका थिए ।
खेलले खासै विकास लिन सकेको थिएन । खेल भने भइरहने गरेको थियो । त्यही समयमा नेपाल आएका कैलाश रोका मगर र अशोक रोका मगरले दाङ जिल्लाको क्रिकेट खेललाई माथि उठाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । त्यस क्रममा उनी धेरै प्रतियोगिताहरु खेलेका छन् । ती खेलमध्येको उनले बिर्सिनै नसक्ने खेल हो, २०५६ सालमा भैरहवा रंगशालामा भएको राष्ट्रिय प्रतियोगिता । उक्त प्रतियोगितामा कास्की, कपिलवस्तु, रुपन्देही, दाङ, चितवन, नवलपरासी, पाल्पालगायतका जिल्लाहरुको सहभागिता रहेको थियो । ती प्रतियोगितामा दाङले बलियो टिमका रुपमा रहेको पाल्पा जिल्लाको क्रिकेट टिमलाई जितेको थियो । त्यो प्रतियोगिताको फाइनलसम्म दाङ नपुगे पनि पाल्पा जस्तो बलियो टिमलाई ३ विकेटले हराउँदाको त्यो क्षण मेरो जीवनको अर्काे खुशीको क्षण हो । दाङ जिल्ला क्रिकेट संघबाट सहभागी भएको उक्त प्रतियोगिताको टिम क्याप्टेनसीपमा कैलाशका भाइ अशोक रोका मगरले गरेका थिए ।
त्यस्तै २०५३ सालमा इण्डो नेपाल क्रिकेट प्रतियोगिता जित्दाको क्षण पनि उनको अर्काे खुशीको क्षण हो । त्यो खेल उहिले घोराहीमा रहेको सडकडिभिजन कार्यालयको अगाडिको उहिलेको खुल्ला मैदानमा भएको थियो । ‘उक्त प्रतियोगितामा कपिलवस्तु जिल्लासँग भएको खेलमा कपिलवस्तुलाई हराउँदै हामीले आफ्नै भूमिमा प्रतियोगिता जितेका थियौँ, इण्डो नेपाल क्रिकेट प्रतियोगितामा कपिलवस्तु र दाङका विचमा तीन वटा खेलहरु भएका थिए’–उनले भने–‘तीनवटा खेलहरुमध्ये दुई खेल जित्दै दाङ विजेता भएको थियो, त्यो क्षण हाम्रा लागि खुशीको क्षण हो ।’
त्यस्तै उनी दाङ आइसकेपछि पनि इण्डियामा हुने विभिन्न प्रतियोगिताहरु खेले । कोइलावासमा बस्ने साथीहरुसँग मिलेर उनी भारतको तुलसीपुर, गोण्डा, बलरामपुरलगायतका विभिन्न स्थानका प्रतियोगितामा सहभागी हुन्थे । २०४६ सालतिरको कुरा हो, उनी कोइलावासको टिमबाट भारतको तुलसीपुरमा भएको खेलमा सहभागी भएका थिए । त्यो प्रतियोगिताको फाइनलमा कोइलावास र भारतको तुलसीपुरबीचमा खेल भइरहेको थियो । खेल भइरहेका बेला उनी आउट भए । त्यसपछि त्यहाँ विवाद सुरु भयो । उनको टिमले आउट नभएकोलाई हराउनका लागि आउट गराइएको भन्दै विरोध गरेपछि विवाद बढ्दै गयो । त्यही बेला उनका समर्थक एक जनाले खेत जोत्नलाई प्रयोग गरिने टेक्टर ल्याएर क्रिकेट खेल्न प्रयोग गरिदिएको मैदानलाई जोतिदिँदाको त्यो क्षणलाई समेत उनी जीवनको अर्काे रमाइलो क्षणका रुपमा लिने गरेका छन् । प्रतियोगिता विवादित भए पनि ट्याक्टर ल्याएर खेलकुद मैदान नै जोतेको उनले पहिलो पटक देखेका थिए । त्यो घट्ना सम्झँदा उनलाई अहिले पनि रमाइलो लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
क्रिकेट खेलसँगै सानैदेखि घुमफिर र खानपिनमा रमाउन चाहने उनको अर्काे खुशीको क्षण हो दुवई पुग्दाको । २०५१ सालतिरको कुरा हो । क्रिकेट खेल्दै विभिन्न ठाउँमा जाने क्रममा एकदिन उनको ध्यान पत्रिकाको भ्याकेन्सीमा पुग्यो । त्यो भ्याकेन्सी थियो दुवै एयरपोर्टमा कामदारको । त्यो भ्याकेन्सी देखेपछि उनले फारम भरिहाले । त्यहाँ जानका लागि ४ हजार बढीले आवेदन दिएका थिए । ‘भ्याकेन्सीमै अंग्रेजी राम्रोसँग लेख्ने र बोल्न सक्ने भनेको थियो, त्यसैमा म परेछु, घरमा थाहै नदिएर म दुवै एयरपोटमा काम गर्न पुगेको थिएँ । त्यहीँबाट घरमा फोन गरेँ । तर घरपरिवारले विश्वास नै नगरेपछि विश्वास दिलाउनका मैले फोटो खिचाएर हुलाकबाट पठाउनुपरेको थियो । त्यो घट्ना पनि मेरो अर्काे रमाइलो खुशी हो ।’
क्रिकेट खेलसँगै राजनीतिमा लागेका रोका मगर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला कमिटी सदस्य तथा खेलकुद विभागका उपसंयोजक हुन् । जिल्ला खेलकुद विकास समितिको निवर्तमान कोषाध्यक्ष समेत रहेका उनी नेपाल क्रिकेट एशोसिएशन (क्यान) प्रदेश नं. ५ र कर्णाली प्रदेशका सचिवालय सदस्य एवं आर्थिक विभाग सदस्यका रुपमा रहेका छन् । रोका मगर २०२८ सालमा भारतको हिमाचल प्रदेशको सिम्लामा बुबा गणेशप्रसाद रोका मगर र स्व. कर्मसरा रोका मगरको पाँचौ सन्तानका रुपमा जन्मिएका थिए । उनका दुइ आमाबाट दश भाइ छोराहरु रहेका छन् । २०५५ सालमा अञ्जुसँग विवाह गरेका रोका मगरका तीन छारा रहेका छन् ।
देउखुरीमा महोत्सवको तयारी तीव्र, महोत्सवको उद्घाटन मन्त्री केसीले गर्ने
महोत्सवको तयारी पुरा, भोली उद्घाटन गरिने